एक करोडको नाक - परिहास - नेपाल
इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर कमरेड द्वारिकालाल चौधरीले पत्रकारको नाक भाँच्न १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको जानकारी दिएका छन् । यसका लागि मेयरसाबलाई धन्यवाद नै दिनुपर्छ । उनको यो उद्घोषका साथै पत्रकारको नाकको मूल्य निर्धारण पनि भएको छ । उनले पत्रकारको नाक भाँच्न १ करोड छुट्याएको छु भनेपछि स्वतः पुष्टि भयो कि पत्रकारको नाकको मूल्य त १ करोड रहेछ । पत्रकारको नाकमाथि यति ठूलो मूल्य तोकिदिएकामा मेयर चौधरीलाई धेरै–धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
आजसम्म नेपालको कुन पत्रकारको मूल्य १ करोड तोकिएको छ ? पत्रकारको त पूरा जीउ नै भाँचे पनि १ करोड पाइँदैन । हदै पाइए १० लाख । त्यो पनि प्रधानमन्त्रीसँग डाइरेक्ट चिनजान छ भने । होइन भने १० हजार पनि पाउन सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा मेयर चौधरीले केवल एउटा नाकको १ करोड तोकिदिए । के यो सानो हो ?
एउटा नाकको मूल्य १ करोड भनेपछि अरु अंगको कति–कति पर्ने होला, अनुमान गर्नुस् । आँखा फोडे कति ? टाउकै फोडे कति ? हात भाँचे कति ? खुट्टा भाँचे कति ? करङ भाँचे कति ? यो सबैको हिसाबसमेत जोड्ने हो भने त एउटा पत्रकारको फूल बडीको मूल्य ५० करोडभन्दा कम पर्दैन होला ।
यसका लागि मेयर सा’बलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिनुपर्छ । उनकै कारण नेपाली पत्रकारको मूल्य यति बढ्न सकेको हो । होइन भने आजसम्म कुनचाहिँ नेता, गुन्डा, मन्त्री, सचिव आदिले पत्रकारको एउटा नाकका लागि १ करोड तिर्ने भनेका छन् ? १ करोड त के, पत्रकारको नाक भाँच्न आजसम्म १ रुपैयाँ पनि कतै कसैले तिरेको मैले सुनेको छैन । पहिलो पटक सुनेँ, त्यो पनि पूरा १ करोड । पत्रकारको नाकको मूल्य १ करोड पुर्‍याइदिएकामा मेयर द्वारिकलालजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद !